Ubudlelwane Ukudlala ngothando
Kusukela ezikhathini zasendulo, ukudlala ngothando kwakubhekwa njengobuciko obukhethekile. Abesifazane, ababenolwazi olukhulu kulolu "thokozo lokukhohliswa," bafundisa amantombazane amancane ubuqili balo bhizinisi elimangalisayo. Okwamanje, ngeshwa, izikhathi zide kakhulu. Amehlo ahloniphekile kanye nezihlathi ezibomvu ahlala kude esikhathini esidlule, futhi kwashiya izinkomba, ngakho-ke labesifazane baqala ukukhuluma ngokukhululekile ngemizwa yabo ngisho nokuqala ukumema abafana kuze kube manje.
Iningi labesilisa abanesibindi abanamandla bayeka ukuthanda lokhu, futhi ngenxa yokuthi intombazane kufanele kunoma yisiphi isimo sibe mnandi, sinesizotha futhi sibe nemfihlo yakhe, efuna ukuyithola. Ngakho-ke kungani singasifunde izinto eziyisisekelo zokudlala ngothando futhi sitshele imithetho eyisisekelo yokuthi ungaqala kanjani ukuthandana nomuntu?
Kuyini ukudlala ngothando?
Ngakho-ke, qala ukudlala ngothando nomuntu ovela kuncazelo. Ngokudlala ngothando, kuwumkhuba ukubona noma iyiphi indlela yokuheha abantu abangefani nabobulili obuhlukile. Ukudlala ngothando kusekelwe ekuvusweni kwesithakazelo nesifiso sokwazi umuntu oseduze. Naphezu kokuthi ukuzithokozisa ngokwayo kuthatha ubuhle obuncane, ngokuvamile kuba umsunguli wobuhlobo obunzima. Kodwa nje ungazitholi ngothando nomuntu njengendlela yokumyisa emadodeni, ngoba, okokuqala, lo mdlalo, ngenxa yokuthi intombazane ihlale ihlale "ngethoni" futhi izwa ukuheha kwayo.
Izisekelo zokudlala ngothando nomuntu: ukuqala kuphi?
Ake sithi awukwazi ukukhuluma nendoda (ongazi nhlobo) endaweni yomphakathi ngoba wesaba ukuthi uyabonakala uyisiphukuphuku noma uyisimangaze emehlweni akhe. Kulesi simo, okokuqala, kufanelekile ukuzikhandla ngokwakho, uzama ngazo zonke izindlela ukuthi unqobe ukuhluleka kwakho. Kule ndaba, singakutshela indlela eyodwa ephumelelayo kakhulu: thatha ukubusa kanye ngosuku ukuze uzame ukukhuluma nanoma yimuphi umpasenti ohleliwe. Ngemva kwesikhashana, ngokuqinisekile uzoqonda ukuthi akukho lutho olubi kulokhu. Kodwa ngawe, izizathu ezimbalwa zokuqala ukuxoxa ngesikhashana: "Ngisemgwaqweni okokuqala, awukwazi ukungitshela ukuthi i-service centre / beauty salon / ilabhulali, njll itholakala kuphi?" Noma "Angizange ngifinyelele ebhasini, uyazi isikhathi sokuhlela futhi lapho olandelayo efika khona? "," Ngatshelwa ukuthi endaweni ethile kule ndawo kune-boutique ehle kakhulu ... "
Ngemuva kwengxoxo yalolu hlobo uyeka ukwesaba kuwe, udinga ukuhamba ngokushesha endaweni eyinkimbinkimbi, lapho kufanele ubonise khona ikhono lakho lokuqondisa ingxoxo ngendlela efanele. Isibonelo, emva kokuphendula umbuzo: "Uphi ikhemisi?" Kunjengokungathi ngengozi, ukufakazela ukuthi "ugijimela emgwaqweni ihora futhi awukwazi ukukuthola." Ngamagama, shiya noma yiliphi ibinzana elizosikisela ngesitayela esingakahlelekile senkulumo. Ngesikhathi umuntu ethanda ukuxoxa ngale ngxoxo, ngokuqinisekile uzosekela lo mdlalo olula. Yebo, uma konke kuhamba kahle, ungathukutheli. Iningi labesifazane abangakwazi ukuqala ukudlala ngothando nobulili obuhlukile ngendlela efanele, bangakwazi ukuzivala ngaleso sikhathi, kodwa akufanele. Iseluleko sethu ukumomotheka, ukubonga umngane ongaziwa futhi uhambe ngebhizinisi labo.
Amathiphu ambalwa okuqala ukudlala ngothando
Ukuqala ukudlala ngothando kungenkulumo engavamile lapho kufanele ubonise njengomuntu onentshisekelo nokukhathalelayo. Unesithakazelo kumuntu. Ngendlela, akufanelekile ukunqoba indoda ukuma phambi kwakhe ngesithombe somlingisi obulalayo, kwanele nje ukukhombisa ukuqwashisa kwakho kuzo zonke izici zokuphila. Ungakhohlwa ukubuza imibuzo eholayo nokuphawula kwamanye amazwi asho. Yiba nomusa ngokuncoma kumuntu, kodwa khumbula, kufanele kube nesilinganiso kukho konke. Ngendlela, ungakhohlwa ukuzibona wena njengoba unayo yonke imfanelo yakho kanye nezidakamizwa. Kuphela kuleli cala ungaqala umdlalo wakho ngaphandle kwesivimbela nendoda.
Futhi ekugcineni, ungakhohlwa ngesisekelo sanoma yikuphi ukulingana - ukumomotheka ngothando. Kungenxa ngosizo lwakhe ukuthi ngokuqinisekile uzomshaya i-psyche yesilisa endaweni!
Indlela yokuhlangana nomfana esikoleni
Iziphi izihloko zokukhuluma nomfana ku-inthanethi?
Ngingahlangana kanjani nomfana esikoleni
Ukuhlangana emva kokuhlangana kwi-intanethi
Isimo esifanele sokuncoma ekhelini lakho
Indlela yokuhlela isidlo sokuthanda abazali
Indlela yokuphila kuze kufike uMshado Wegolide
Yini okufanele uyenze ukuze ube ne-diathesis ezinganeni
Amavithamini amahle kakhulu emanzini amaconsi
Ukomisa i-Taralli yase-Italy
Isaladi lamakhukhamba nenkukhu
Othandana no-Xenia Borodina uzokhuluma enkantolo ngokumelene noVadim Kazachenko
Amaforamu wezocansi nokunganeliseki ngokocansi
Yisiphi isizathu sokulutha kwezidakamizwa kanye nendlela yokuzigwema?
Izinhlelo zekhompyutha zokubalwa kwekhaya
Okwesithathu okungeziwe: indlela yokukhipha umkakho kunkosikazi wakhe. Ihlolwe ngomkhuba
Ama-fritter ane-ricotta nama-apula